Dhageyso :-Xildhibaan Fiqi oo Baarlamaanka galmudug ku tilmaamay maxaabiis - Awdinle Online
Dhageyso :-Xildhibaan Fiqi oo Baarlamaanka galmudug ku tilmaamay maxaabiis
January 16, 2020 (Awdinle Online) –Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay Galmudug ayaa sheegay in Xildhibaannada Cusub ee Baarlamaanka Galmudug yihiin maxaabiis.
Waxaa uu sheegay in doorasahda Galmudug ay ka dhiman tahay waqti kooban,hayeeshee Baarlamaanka Galmudug loo diidan yahay inay dhageystaan aragtida musharixiinta si ay uga soo xushaan qofkii ay dooran lahaayeen,balse uusan sheegin cida ay maxbuuska u yihiin.
“Waxaan maqlayey in xildhibaannadii loo diidan yahay inay banbaxaan oo dhageystaan aragtida musharixiinta si ay uga kala qiyaastaan qofkii ay dooran lahaayeen,hadii ay rabaan xildhibaannada in la soo furto waan soo furaneynaa ayuu yiri” Xildhibaan Fiqi.
Hadalka Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa waxaa uu daba socdaa qaar kamid ah Musharixiinta Madaxweynaha Galmudug oo sheegay in Xildhibaannada Cusub ee Baarlamaanka 2aad ee Galmudug loo diidey kaararka Aqoonsiga.
Previous articleUK court Orders Djibouti to Restore DP World Rights
Next articleXOG:- Nin Hubeysan Oo Muqdisho Lagu Toogtey
Dhacdo naxdin leh oo Caawa ka dhacday Magaalada Dhuusamareeb
Shaqaalaha Dowladda Soomaaliya oo la fasaxay
Booliska Somaliland oo xiray Fanaanka Caanka ah ee Qamar Suugaani
Maxay ka wada hadleen RW Rooble iyo Wakiilka QM ee Somalia?
Dad loo qabtay dilka ka dhacay Magaalada Kismaayo
XOG:- Sababaha loo furay wadada isku xirta Tarabuunka & KM4
Madaxweynaha Somaliland oo la kulmay Wafdi ka socda Taiwan
Faah faahin: Dil ka dhacay Magaalada Kismaayo
Ciidanka Dowlada oo bur burin ku bilaabay dhul uu sheegtay in uu leeyahay Wiil uu dhalay Siyaad Barre